Mkpado: css | Martech Zone
Ọ bụ ezie na m na -abanye n'ime teknụzụ kwa ụbọchị, anaghị m enweta oge dị ka m ga -achọ ịkekọrịta njikọ dị mgbagwoju anya na akpaaka nke ụlọ ọrụ m na -eme maka ndị ahịa. Ọzọkwa, anaghị m enwe ọtụtụ oge nchọpụta. Ọtụtụ teknụzụ m na -ede maka ya bụ ụlọ ọrụ na -achọ Martech Zone na -ekpuchi ha, mana oge ọ bụla - ọkachasị site na Twitter - ana m ahụ ụfọdụ mkpọtụ gburugburu ọhụrụ
M na-ede banyere ọsọ peeji ntakịrị na saịtị a ma ọ bụ akụkụ dị mkpa nke nyocha na mmelite anyị na-eme na saịtị ndị ahịa anyị. Ewezuga ịkwaga na sava ndị dị ike na iji ngwaọrụ dịka Netwọk Nweta Ọdịnaya, enwere ọtụtụ usoro mmemme ndị ọzọ onye nrụpụta weebụ nwere ike iji. Standardkpụrụ maka mpempe akwụkwọ mbụ nke Cascading dị afọ 15 ugbu a. CSS bụ mmalite dị mkpa na weebụ